Akụkọ - NEWGENE nweta nnwale nnwale nke onwe na Belgium na Sweden
COVID-19 Antigen Detection Kit nwetara nnwale nyocha onwe onye site na Ministry of Health Belgium (FAMHP) na thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike Sweden (Swedish Medical Products Agency). NEWGENE bụ ụlọ ọrụ China mbụ nwetara nnwale nnwale onwe ha na mba Europe abụọ a, na-esote Denmark na Czech Republic ebe NEWGENE nwetara nnwale nnwale onwe tupu.
NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (nyocha onwe onye) bụ nke kachasị nghọta na nkọwa. Enwere ike ịgụ nsonaazụ ule ahụ na 15 nkeji na arụmọrụ dị mfe, nke kwesịrị ekwesị maka ndị nkịtị na-enweghị nlekọta na ọzụzụ ọkachamara. NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (nyocha onwe onye) dabara adaba maka nnwale n'ụlọ nke ndị mmadụ n'otu n'otu, nke na-ewe obere oge iji tụnyere ule PCR. NEWGENE na-anwale ihe onwe ya ga-eme ka nrụgide dị n'ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ ahụike belata.
Belgium na Sweden nwere ihe karịrị nde mmadụ 10, na mba ndị COVID-19 metụtara na mba Europe. NEWGENE ga-aga n’ihu na-eweta ngwaahịa nchọpụta ka elu ma nyere aka na mgbochi na njikwa ọrịa na-efe efe na mba abụọ a.